စက်တင်ဘာလ 2016 |4၏စာမျက်နှာ 78 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 4)
အကြီးတန်း Matchmove အဆိုတော်
အကြီးတန်း Matchmove အဆိုတော်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: အလုပ်တောင်းဆိုနေတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု / အသိပညာအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 09 / 28 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘထောက်ပံ့ပေးမယ့် matchmove အနုပညာရှင်အဖြစ်•4+ နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံ, ဖြစ်နိုင်ရင်အပေါ် ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများကိုပါရှိပါတယ်။ •ဦးစားပေးမည်နောက်သို့ခဲအတွေ့အကြုံကို။ ကျယ်ပြန့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ skillset နှင့်ဖန်တီးမှုဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးက reel • ...
သတင်းဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Portland, OR Duration: လစာ 09 / 28 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုယောဘကျနော်တို့အနေနဲ့ကြုံတွေ့သတင်းများဒါရိုက်တာရှာကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားပေးမပေးဘူး။ ယောဘ SUMMARY: အဆိုပါသတင်းဒါရိုက်တာအားလုံးမီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြတ်ပြီးအယ်ဒီတာအဖွဲ့ရူပါရုံကိုကွပ်မျက်အတွက်တာဝန်ရှိသည်နှင့်ထိပ်တန်းသတင်းသို့စုဝေးစေခဲ့ပြီးသမျှသောဒြပ်စင် orchestrates ။ ...
အကြီးတန်း Houdini FX အဆိုတော်
အကြီးတန်း Houdini FX အဆိုတော်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: လစာ 09 / 28 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုယောဘအလုပ်ယောဘသည်လိုအပ်ချက်များအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားပေးမပေးမ: အနုပညာနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်သရုပ်ပြ• Demo reel ။ • Houdini နှင့်အတူကြှမျးလိုအပ်ပါသည်, မာယာ၏အသိပညာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ • Linux ကိုအတူကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ပါသည်။ •အတူအတွေ့အကြုံ ...
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးအလုပ်အမှုဆောင်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: အချိန်ပြည့်, 11 / 1 လစာစတင်သည်ပေးမ 09 / 28 / 16 အပေါ် posted ယောဘအလုပ်ဗိုလ်မှူးအမေရိကန်ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 11 / 01 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးအလုပ်အမှုဆောင်ရှာကြံကုမ္ပဏီ။ ဗိုလ်မှူးတာဝန်ဝတ္တရားများပါဝင်သည်: အ VP နဲ့တွဲပြီးစီအီးအို & CFO -Work နှင့်အတူဖန်တီး -Implement မဟာဗျူဟာများနှင့်မူဝါဒများ ...
Gaffer ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: 1 နေ့က - 10 /7လစာ $ 350 / 12 ယောဘသည် 09 / 28 / 16 အပေါ် posted, Gaffer သေးငယ်တဲ့အတွက်လိုအပ်သောအလုပ်အကိုင်အအကွောငျးဝေမျှမယ်ပေးမ 10 / 07 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply Single-တည်နေရာရိုက်ကူး။ အဆိုပါပြပွဲအတိအကျတည်နေရာ TBD နှင့်အတူတစ်နေရာရာဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံရဲ့မီးဖိုချောင် / မန်ဟက်တန်မြို့အနီးတစ်ဘားမှာပစ်ခတ်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးကင်မရာများနှင့်အတူရိုးရှင်းသော, ဘား-facing setup ကို။ လိမ့်မည် ...
တည်နေရာ Scout ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA Duration: 1 နေ့က - 10 /2လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 09 / 28 / 16 အပေါ် posted 10 / 02 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားအားလုံးဟေး, ကျနော်တို့နေ တချို့ရိုးရှင်းတဲ့တည်နေရာကင်းရှာနေ - ထွက်ရှိသောသုံးပြင်ပနေရာများတွင်ရှာနေထိတွေ့ရတဲ့အပျေါမှာအသေးစိတ်ပေးတော်မူမည် - ကျေးဇူးတင်စကား! လီယန်း Subscribe ...
ကင်မရာအော်ပရေတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Fresno,, CA Duration: 1 နေ့က - 10 /5လစာ 09 / 28 / 16 10 / 05 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply များအတွက် B-လိပ်သေနတ်သမားရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး စစ်မှန်တဲ့-ရာဇဝတ်မှုပြပွဲ။ သငျသညျလွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်, နေ့အဆုံးမှာဖိုင်တွေ upload မှကြည်ညိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ လျောက်ပတ်သောအပ်လုဒ်ကိုအမြန်နှုန်းရှိပေးပါ။ ...
ဓါတ်ပုံပညာ Company ၏ဒါရိုက်တာစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ကောလိပ်ဘူတာ, တက္ကဆပ် Duration:2ရက်, 10 /7လစာ $ 750.00 / 12 ယောဘသည် 09 / 28 / 16 10 / 07 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့များမှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted စတင်သည် တက္ကဆက် A & M အတူ conjuncture အတွက်ကြွက်သားနို့များအတွက်ဘောလုံးအခြေတည်အပိုင်းအစရိုက်ကူး။ စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုယ်ပိုင်ကင်မရာ (FS7, C300 သို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်) ရှိလိမ့်မယ်။ အကယ်. ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင် / ...
4 ၏စာမျက်နှာ 78«ပထမဦးစွာ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး»